Tratran’ny Mpanaramaso ny Ady Amin’ny Kolikoly Okrainiana Indray Ireo Depiote Mandatsa-bato Imbetsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2017 5:39 GMT
Sary: Chesno, YouTube
Tamin'ny Alakamisy, nandrakitra tranga solombavambahoaka dimy nandatsaka vato marobe tamin'ny alalan'ny rafi-pifidianana elektronika ao amin'ny parlemanta ny mpanaramaso ny ady amin'ny kolikoly Okrainiana, Chesno. Nandrakitra tranga hosoka miisa 161 ny fikambanana hatramin'ny nanombohany nanisa tamin'ny Desambra 2014. Mampiseho solombavambahoaka dimy avy amin'ny antoko politika telo samy hafa mandatsa-bato amin'ny milina fifidianana elektronikan'ny mpiray antoko aminy tsy tonga nanatrika ny fandatsaham-bato ny lahatsary navoakan'ny Centre UA tao amin'ny youtube, ny Centre UA dia fikambanana iray manandratra ny mangaraharaha sy ny fitakiana ny tamberin'andraikitry ny fanjakana ao Okraina ary miara-miasa amin'ny Chesno.
Nanjaka nandritra ny taona maro ny Knopkodavstvo, na bokotra fanampiana, araka ny ahafantarana ny paikady amin'ny latsa-bato tao amin'ny parlemanta okrainiana antsoina hoe Verkhovna Rada : mampiasa ny karapanondron'ny depiote hafa ireo solombavambahoaka ary manindry an-tsokosoko ny bokotra «eny» na «tsia» amin'ny milina fifidianana hisolo tena ny mpiray antokon'izy ireo izay tsy nanatrika hanampy amin'ny fankatoavana na fitsipahana lalàna iray. Na dia nilaza aza ireo mpiaro ny fanaovana izany hahatonga ny fanatrarana ampahan'isa ilaina hampanakery ny fifidianana rehefa vitsy ny mpanatrika, ny knopkodavstvo dia manitsakitsaka mazava ny lalàmpanorenana, izay manondro fa ilay solombavambahoaka tenany mihitsy no ilaina mifidy.
Malaza ny Knopkodavstvo: antoko roa monja voasolo tena tao amin'ny Rada ankehitriny, ny antokon'ny Tanindrazana an'ny Praiminisitra teo aloha Yluliya Timochenko sy ny antokon'ny Fahaleovantena (Self Reliance) an'ny ben'ny tanànan'i Lviv, Andriy Sadoviy, irery no tsy nahitana solombavambahoaka nandray anjara tamin'io paikady io. Manana lahatahirin'ny mpanindry bokotra [depiote hafa] (knopkodavi) ny Chesno, izay midika hoe «am-pahamarinana» ary nampahatsiahy fa tokony ialàna izany fomba fanao izany: nanomboka tamin'ny Desambra 2014, solombavambahoaka miisa 76 no [tratra] nampiasa ny paikady, ary marobe ireo nanao izany imbetsaka. Ny mpamerimberina indrindra dia i Oleksandr Urbansky, mpikambana ao amin'ny vondrona parlemantera BPP an'ny filoha Petro Poroshenko, izay nandray anjara tamin'ny knopkodavstvo im-polo.
Navoakan'ny Chesno tamin'ny alalan'ireo andian-dahatsoratra tao amin'ny tranonkalany ireo tranga fanindriana bokotra farany. Yevhen Heller, solombavambahoaka avy ao amin'ny antoko Fifohazana izay rafetin'ny mpikambana tao amin'ny Antokon'ny Faritra an'ny filoha voahongana Viktor Ianoukovitch, no tsikaritra nandeha avy any aoriana indrindra ao amin'ny parlemanta hifidy hisolotena ny mpiray antoko aminy tamin'ny volavolan-dalàna momba ny fahefana omena ny Ben'ny tanàna na kely na lehibe. Lany ny lalàna taorian'ny fandinihana fanindroany, nahazo vatom-pankasitrahana miisa 238, mihoatra 12 amin'ny vato farafahakeliny ilaina hahalany ilay volavolan-dalàna.
Mandritra izany, nampiasa ny milina fifidianana an'ny solombavambahoaka hafa i Yaroslav Edakov avy ao amin'ny Antokom-bahoaka (tarihin'ny praiminisitra teo aloha Arseniy Yatsenyuk) mba hifidy volavolan-dalàna (laharana faha-5610) izay manova ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena mba hanamora ny fanenjehana ireo manampahefa taloha-anisan'izany ireo voampanga tamin'ny fitifirana mpanao fihetsiketsehana nandritra ny Revolisiona EuroMaidan tao Okraina. Iray amin'ireo latsa-bato mahamenatra ny volavolan-dalàna izay vato 226 kely indrindra nilaina.
Rehefa natao ny latsabato, hita mijery ny kamera i Edakov sy ny mpiara-miasa iray, toa mahafantatra fa tratra ry zareo.
Nandray anjara tamin'ny knopkodavstvo nandritra ny latsa-bato ihany koa ny mpikambana iray hafa ao amin'ny Mandan'ny Vahoaka, Andreï Ivanchuk: Mampiseho ny lahatsary manaraka fa vato telo no nalatsaka ho fanohanana ny volavolan-dalàna teo akaikin'i Ivanchuk ny na dia depiote roa monja aza no hita tao.
“Nanindry bokotra” tamin'ny latsa-bato tamin'ny volavolan-dalàna laharana faha-5610 ihany koa ny solontena avy amin'ny BPP: mampiseho ny solombavambahoaka Borys Kozyr manome izay hita toy ny kara-panondron'ny mpikambana hafa ao amin'ny BPP, Gleb Zagory ny lahatsary manaraka; avy eo, mampiseho ny efijery miaraka amin'ny famoahana ny latsa-bato fa nalatsaka avy amin'ny seza banga teo akaikin'i Zagory ny vato.
Farany, depiote hafa avy amin'ny Mandan'ny Vahoaka, Oleksandr Romanovsky no niezaka nanafina ny latsa-bato indroa nataony tamin'ny volavolan-dalàna iray (laharaha faha:4742) momba ny fitantanana ny tanàna tamin'ny alalan'ny fampiasana valizy kely (malety) .
04 Oktobra 2020Rosia
26 Desambra 2019Eoropa Afovoany & Atsinanana